Nyocha Vacos Baby, nyocha na arụmọrụ | Akụkọ Ngwa
Vacos Baby Monitor, nyocha na arụmọrụ
Rafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | Emelitere ka 31/08/2021 23:50 | Nyocha
Anyị na Actualidad Gadget laghachiri nyocha maka ezinụlọ, ọkachasị maka ezinụlọ nwere ụmụ ọhụrụ. Teknụzụ batara na ndụ anyị iji mee ka ọ dịrị anyị mfe. NA maka ndị nne na nna nwere ụmụ n'ime ụlọ, enyemaka ọ bụla dị obere. Taa anyị na -ekwu maka ya Ihe nlele Baby efu, igwefoto adịchaghị mma ka ị ghara ifufu nkọwa nke ntakịrị ụlọ ahụ.
Enwere ohere na -adịghị agwụ agwụ n'ahịa mgbe ị na -achọ igwefoto ileba anya nwa. Taa Anyị na -agwa gị ihe niile gbasara atụmatụ Vacos. Igwefoto nchekwa zuru oke maka na -ejikwa vidiyo, ọdịyo, ọhụụ abalị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ karịa ndị ọzọ nwere ike ịnye.
1 Vacos Baby Monitor, nchekwa nwa gị
3 Nhazi igwefoto na ihuenyo
4 Atụmatụ Vacos Baby Monitor
4.1 Ihe niile dị n'okpuru nchịkwa "
5 Uru na ọghọm nke Vacos Baby Monitor
Vacos Baby Monitor, nchekwa nwa gị
Na -ele anya ọdịdị ahụ, Vacos Baby Monitor igwefoto, bụ yiri igwefoto nchekwa ndị ọzọ na anyị enwewo ike igosipụta. Emebere igwefoto maka ụdị onyunyo ọzọ, dị ka ụlọ anyị ma ọ bụ azụmaahịa anyị. Agbanyeghị na ọ bụrụ na anyị elee anya N'ime uru ọ nwere, anyị na -ahụ ndịiche dị mkpa. Nke a ọ bụ ihe nleba anya nwa ị na -achọ? Jide ya Ihe nlele Baby efu ke ukara website na nke kacha mma price.
Anyị nwere ike ịsị na ọ dị iche na nke anyị hụrụ vidiyo sekit mechiri emechi ebe anyị nwere igwe na -ebugharị vidiyo, igwefoto na ihe nnata mgbaama, dị ka enyo, ebe ha nọ njikwa ndị dị mkpa maka nhazi na ojiji ya. A sekit dị nchebe 100% yana enweghị mbanye anataghị ikike.
Ugbu a bụ oge ileba anya n'ime igbe nwa nlekota “kit” a. Dịka anyị siri hụrịrị, anyị na -ahụ isi ihe abụọ dịka igwefoto vidiyo n'onwe ya, na -acha ọcha ma jiri plastik mee ya. Na nke ileba anya na enyo na bọtịnụ njikwa.
Anyị nwekwara ihe ndị ọzọ dị mkpa maka iji dịka eriri. Anyị nwere eriri ugbu a maka igwefoto, na otu ọzọ maka ịchaji batrị ileba anya. Abụọ na Typedị USB Type-C. Ọzọkwa ihe nkwụnye ọkụ abụọ maka eriri ọ bụla.
Dezie nke gị ebe a Ihe nlele Baby efu na ọnụahịa kachasị mma na weebụsaịtị gọọmentị
N'ikpeazụ, anyị na -ahụ a ngwa a ga -eji kpaa igwefoto vidiyo na mgbidi gbakwunyere ebe ọ masịrị anyị. Ụmụntakịrị nkọwa ịchọ mma nke na -enye igwefoto ka ọ dị ka nwata na anyị nwere ike ịtụkwasị ya; ụzọ abụọ mpi pink na odo. Na dị ka mgbe niile, a obere akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ yana akwụkwọ ikike nke ngwaahịa.
Nhazi igwefoto na ihuenyo
Dịka anyị siri kwuo, enwere ike ịse igwefoto otu n'ime igwefoto onyunyo nke anyị nwere ike nwalee. Ọ nwere ntọala cylindrical nke akụkụ ọzọ gbara okirikiri dabere na ya nke a na -etinye oghere. Mana ka, anyị na -ahụ ihe ndị dị iche na ya, dị ka antenna, ma ọ bụ ekwe omume ịhazi ya na ụfọdụ ngwa mma eji achọ mma nke agụnyere n'igbe ahụ.
Aka na igwe okwu yana yana ọkà okwu, ya mere eji kwadebe ya ụda bi-directional. Obi abụọ adịghị ya na ọ bara ezigbo uru inwe ike ịgwa nwa ọhụrụ okwu oge niile ma ọ bụrụ na o teta n'ụra ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgwa ya okwu n'igwe okwu iji mee ka obi dajụọ ya. Ngosipụta ahụ nwere mkpebi HD 720P na a magburu onwe ọhụụ abalị nke na -enye onyonyo dị nkọ na ọkụ ọ bụla, ma ọ bụ na -anọghị.
El monitor nke na -achịkwa igwefoto nwere 5 inch LCD ihuenyo. N'ihu, a la derecha nke ihuenyo, anyị na -ahụ ahụ bọtịnụ anụ ahụ na -arụ ọrụ ijikwa ojiji ha.
Na azụ, gbakwunyere a ntutu anya ihe na aru oru ka anyị wee jide ya elu, anyị na-ahụ poolu nke mere na a na -ewepụta mgbama ahụ wee nata idoanya ka mma. Na ala nwere a oghere kaadị ebe nchekwa ruo 256 MB nke ebe nchekwa ebe anyị nwere ike chekwaa ndekọ ahụ.
Atụmatụ Vacos Baby Monitor
Oge erugo ịgwa gị gbasara isi ihe mere Vacos Baby Monitor ji bụrụ nhọrọ kacha mma n'ahịa iji kpebie ya. Dịka anyị gwarala gị, ndị imewe, n'agbanyeghị na ya na igwefoto onyunyo “nkịtị”, ọ bụ mara mma, ọgbara ọhụrụ ọ gaghị esekwa okwu na oghere ọ bụla.
Site na nchịkọta ihe nleba anya, anyị nwere ike ịnweta njikwa niile dị mkpa iji nweta ihe kachasị na ya. Na a bọtịnụ ozugbo, anyị ga-emeli ya gbanye ma ọ bụ gbanyụọ igwefoto, ma ọ bụ igwe okwu ịgwa nwa ọhụrụ okwu ma ọ bụ nwee ike ịnụ ma nwa ahụ na -ebe akwa. Site na bọtịnụ dị na mpaghara etiti anyị nwere ike bugharia igwefoto ruo ogo 355 wee jiri ya tigharịa ruo ogo 55. Anyị nwekwara ike jiri bọtịnụ etiti were mbugharị na onyonyo a 1,5X mbugharị ruo 2X.
Ọ gaghị ekwe omume ịchọta njedebe nwụrụ anwụ na Vacos Baby Monitor anyị anaghị edebanye aha. Na ileba anya anyị nwere ike jikọta ihe ruru kamera anọ dị iche iche na anyị nwere ike ịchịkwa n'otu ụzọ ahụ. Ya mere, anyị ga -enwe onyonyo nke nkuku ọ bụla nke ime ụlọ ebe anyị chọrọ ịwụnye ya. Nchedo niile ị na -achọ na ngwaọrụ, na nke ahụ ị nwere ike zụta ugbu a na ya ukara website.
Ihe niile dị n'okpuru nchịkwa "
Sensọ nke igwefoto nwere mee ka ọ bụrụ nke zuru oke ma rụọ ọrụ 100% iji nye anyị ahụmịhe zuru oke. Anyị nwere a ihe mmetụta nke ga -eme ka ileba anya teta ka anyị hụ ma nwa ahụ etetala ụra ma ọ bụ na -agagharị n'oge ụra. N'otu ụzọ ahụ, ihe mmetụta ụda ga -akpalite igwefoto wee nyochaa ma nwa ahụ na -ebe ákwá.
Otu n'ime ihe mmetụta na -eme ka Vacos Baby Monitor dị iche na ndị ọzọ bụ okpomọkụ. Igwefoto nwere ike ịnye anyị ozi gbasara ọnọdụ okpomọkụ nke ime ụlọ ahụ. N'ụzọ dị otu a anyị ga -amata n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa itinye kpo oku ma ọ bụ na ntụle, na ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
Vacos Baby Monitor nwere enwere ike ịdekọ onyonyo. Ọ bụghị naanị na ọ na -enye anyị ndụ na agbasa ozi n'ikuku, ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike iwebata a Kaadị Micro SD ruo 256MB iji chekwaa na vidiyo. Anyị ga -enwe mgbama doro anya na nke anaghị ebipụ yana ogologo ruo 300 mita site na igwefoto ruo ileba anya, anyị nwere ike ịgagharị n'ụlọ n'enweghị nsogbu.
Otu nkọwa dị mkpa bụ na Vacos Baby Monitor ị chọghị ama, yabụ anyị agaghị etinye ngwa. Enweghị njikọ ịntanetị ọ bụla Maka ojiji, ihe nrịbama nke igwefoto na -ebute bụ naanị nyocha n'onwe ya na -achọpụta. Enweghị ngwa ma ọ bụ ịntanetị, onyonyo anyị enweghị ndị na -egwu ya.
Uru na ọghọm nke Vacos Baby Monitor
El Ihuenyo 5 inch na mkpebi 720p
Mfe nfe de jiri site na oge mbụ na ntụgharị nke nhọrọ
Sensọ, ụda, ngagharị na ọnọdụ okpomọkụ
Super mfe iji
Enweghị ịntanetị mgbe ụfọdụ nhazi ụlọ nwere ike tinye ụfọdụ ihe mgbochi
Ahịa elu karịa nkezi
Ihe nlele Baby efu
Ihe na: 1 Septemba nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 31 August 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Vacos Baby Monitor, nyocha na arụmọrụ
Keyboard HyperX Alloy Core na òké Pulsefire, ndị enyi egwuregwu zuru oke [SWEEPSTAKES]
Philips na -eme ka ọkụ Hue ya na -agba egwu na ụda Spotify